हाई हिल प्रयोग गर्नुहुन्छ ? सावधान ! यस्ता समस्याको शिकार हुनुपर्ला - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
हाई हिल प्रयोग गर्नुहुन्छ ? सावधान ! यस्ता समस्याको शिकार हुनुपर्ला
Posted by Headline Nepal | ७ जेष्ठ २०७४, आईतवार १९:०१ |
७ जेठ, काठमाण्डौँ । हाई हिल महिलाका बीच फेसन नै भैसकेको छ । हाई हिलमा हिड्दा र स्मार्ट त देखिएला तर यसले स्वास्थ्यमा पार्ने असर कमैलाई मात्र थाहा होला । जब चाल र शरीरको सन्तुलन बिग्रन थाल्छ अनिमात्र थाहा हुनेछ हाई हिलको प्रभाव।
आजभोलि बच्चैदेखि हाई हिल लगाउने फेसन सुरु भएको छ । बच्चा अबस्थामा लगाएको हाई हिलले युवा अवस्थामा कुर्कुच्चा र मेरुदण्डमा नराम्रो प्रभाव पार्छ।
सुरुको अवस्थामा हिलले खुट्टा सुन्निन्छ भने केही बर्षपछि लगातार खुट्टा दुख्ने, नशामा समस्या, कम्मर दुख्ने जस्ता समस्या आउँछ।
लगातार हिल लगाउने युवतीको खुट्टाको अगाडिको भाग चौडा भई खुट्टाको स्वरूप नै बिगार्छ।
हाई हिलका कारण दुर्घटनामा परेर विश्वभर बर्सेनि सयौं युवती अस्पतालसमेत जानु परेको छ।
एक अनुसन्धानअनुसार लामो समयसम्म हिल जुत्ता प्रयोग गर्ने एक तिहाई महिलामा खुट्टाको औंला सुन्निने (हेमरटोज) देखि टाङको नसामा स्थायी समस्या पनि आउन सक्छ।
अनुुसन्धानअनुसार दशमध्ये एक महिलाले सातामा तीन दिन हाई हिल जुत्ता लगाउछन्। यीमध्ये एक तिहाई लामो हिलका कारण लड्ने वा दुर्घटनामा पर्छन् ।
हाई हिल लगाउँदा शरीरको कम्मरभन्दा तलको भाग अगाडि झुकेको हुन्छ। यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन मेरुदण्डको अवस्था परिवर्तन गरिरहनु पर्छ । यसले कम्मरको नशामा दबाब पार्छ । यसबाट साइटिका नामको रोग लाग्ने संभावना बढी हुन्छ ।
Previous६ सय ८० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना बनाउँदै कर्मचारी सञ्चय कोष
Nextधादिङमा काँग्रेस कार्यकर्ताद्वारा बस तोडफोड
को हुन् पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नवनियुक्त सीइओ भुसाल ?
८ कार्तिक २०७४, बुधबार ०९:२८
अदालतको आदेशपछि ट्रम्प आक्रोशित
३ चैत्र २०७३, बिहीबार ०८:४६
विराटनगर महानगरको मेयरमा काँग्रेसबाट पराजुलीले पाए टिकट , उपमेयरका लागि इन्दिरा
३१ जेष्ठ २०७४, बुधबार १८:१६
‘दलहरु एकठाउँमा जोडिने ठाउं छ’ – भट्टराई
१४ फाल्गुन २०७१, बिहीबार १७:४२